बर्टनको 'क्रिसमसभन्दा पहिलेको दुःस्वप्न' को माध्यमबाट ड्राइभ गर्नुहोस् iHorror
घर हरर मनोरन्जन समाचार तपाईं बर्टनको 'क्रिसमस पहिले क्रिसमस' डरलाग्दो नयाँ आकर्षणमा ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ
तपाईं बर्टनको 'क्रिसमस पहिले क्रिसमस' डरलाग्दो नयाँ आकर्षणमा ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ
by ट्रे हिल्बर्न III सेप्टेम्बर 5, 2020
द्वारा लिखित ट्रे हिल्बर्न III सेप्टेम्बर 5, 2020
यो के हो? यो के हो? यो के हो, टिम बर्टन फ्यानहरू? सामाजिक दूरीहरू कायम राख्नका लागि हालसालका अ string्गहरू अलि बढी सृजनात्मक भइरहेको छ, र यसले केहि राम्रा नवीन आकर्षणहरू निम्त्याउँछ। नवीनतम टिम बर्टनको माध्यमबाट ड्राइभ गर्ने मौका छ क्रिसमस अघि दुःस्वप्न.
फ्रीफॉर्मको हेलोवीन हाउस यस वर्ष फिर्ता आएको छ, केहि साँच्चिकै राम्रो विचारहरू सहित। वास्तवमा यस वर्ष उनीहरूले "हेलोवीन हाउस" को हेलोवीन रोडमा आफ्नो सामान्य मोनिकरलाई पुन: शीर्षक दियो। सडक फ्रिफॉर्मको Halloween१ दिन हेलोवीनको साथमा आधारित छ, केहि फिल्महरू हालको लागि तालिकाबद्ध गरिएको हो फ्रीफॉर्मको लाइनअप प्रेतवाधित रोड प्रतिबिम्बित हुनेछ। अवश्य पनि, यसको मतलब तपाईले पाउनुहुनेछ क्रिसमसको अनुभव हुनु अघि दुःस्वप्न, तर यो त्यहाँ रोकिदैन। ड्राइभ को अन्य भागहरू दृश्यहरू ऐनाको लागि निर्माण गरिएको हो होक्स पोक्स र Ghostbusters.
"फ्रीफोरमको Halloween१ राति हेलोवीन फर्कन्छ! र यस वर्ष हामी सडकमा हाम्रो वार्षिक हेलोवीन घटना लिइरहेका छौं, शाब्दिक शान्त! ... कारण, भूतहरू पनि सामाजिक टाढा रहन आवश्यक छ। यो तपाइँको कारको पछाडिको पछाडि बाहिरी इमर्सिभ अनुभव हो! ड्राइभ-थ्रु (यदि तपाईंको हिम्मत छ भने) "क्रिसमस अघि टिम बर्टनको दुःस्वप्न", होकस पोक्स, घोस्टबस्टर, र अन्य स्पूकटाक्युलर आश्चर्यका खेलहरू, प्रदर्शन, र पुरस्कारहरूले भरिएको।। "
त्यो हेलोवीन रोडसँग यसका डरावना आस्तीनहरू सबै छैन। थप रूपमा त्यहाँ ट्रिक वा उपचार हुनेछ, र अभिनेताहरूको एक झण्डा ल्याउन र झगडा साझा गर्न।
सम्पूर्ण शिन्डिग अक्टोबर २--2 देखि लस एन्जलस क्यालिफोर्नियाको हेरिटेज स्क्वायर संग्रहालयमा तल ओर्लन्छ। टिकटहरू हुन् मुक्त र वास्तवमै छिटो जाने आशा गरियो। त्यसो भए तपाईको भोलि सेप्टेम्बर १२ लाई बिहान १० बजे PST मा पर्खनु पर्दछ।
अधिक जानकारी र टिकटहरूको लागि, माथि जानुहोस् N१नाइट्सफालोइन.कॉम।
टिम बर्टनको बीटलेजुइस २ को स्थिति बारे थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
हेलोवीन को Day१ दिनफ्रीफर्मGhostbustersहेलोवीन रोडहोक्स पोक्सक्रिसमस अघि दुःस्वप्नटिम बुर्टन
सर्वश्रेष्ठ पश्चिमी हरर फिल्महरू तपाईंले अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ
साँच्चै डराउनुपर्दछ? यी ईसाई नरक घरहरूको जाँच गर्नुहोस्